Samsung Galaxy M51 ga - enwe igwefoto quad azụ | Gam akporosis
Samsung na-eme atụmatụ ịmalite ihe ọhụrụ nke usoro M a na-akpọ Samsung Galaxy M51, inwe ọtụtụ ihe ị ga-ekwu site na afọ 2020. Ntughari mbu nke egosiri na March 2020 gosiri igwefoto azu ato, ma akuko ohuru na-ekwusi ike na o gha enwe nhazi igwefoto quad.
Ọ ga-enwu gbaa maka nnukwu ihe mmetụta nke nwere ihe dị egwu tinyere ya na angular nke angular nke ha kwuru ga-enye gị zuru ezu ike mgbe ị na-ewere ezigbo ọnyà n'ọnọdụ ọ bụla. Mana ọ bụghị naanị ya, ọ na - abịa ezi nhazi, ọtụtụ RAM na sọftụwia kachasị ọhụrụ arụnyere.
1 Ihe ama ama nke Galaxy M51
2 Ga-abata na izu ole na ole sochirinụ
Ihe ama ama nke Galaxy M51
Ihe nkwụnye ihe ntanetị bụ megapixels 64, na-esote 12 megapixel ultra-angular, ọ dịghị ozi a maara banyere modulu abụọ ndị ọzọ, mana ọ ga-abụ ụdị nnukwu na nke ikpeazụ miri emi. Ihuenyo ga-agafe 6,2 sentimita asatọ, ga-abụ IPS LCD ma nwee mkpebi Full HD +.
El Samsung Galaxy M51 ga-enwe a SoC Snapdragon 675Ọ ga - ejikọta 8 GB nke RAM na nchekwa ga - abịa na nhọrọ abụọ gbanwere, 64 na 128 GB. SMdị SM-M515F gafere Geekbench n'ọnwa gara aga, yabụ na ị gaghị enwe ọtụtụ oge ichere mgbe enwetara gị akwụkwọ na mba dị iche iche.
Ọ ga-abụ otu n'etiti etiti dị mkpa na mwepụta ya nke usoro M, niile mgbe ị matara ngwaọrụ ndị gara aga ga-enwe ike ibuso A akara. Samsung chọrọ ịmalite Galaxy M51 ma ọ gaghị abịa naanị ya, a ga-enwe ma ọ dịkarịa ala otu ụdị ọzọ n'etiti August na Septemba.
Ga-abata na izu ole na ole sochirinụ
Samsung ịmalite Galaxy M51 na izu ndị na-abịanụ, ihe ịrịba ama mbụ na-egosi na ọ ga-eme ya n'August na-esote ma ọ ga-eme ya site na ịmalite nke a na ekwentị ọzọ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na-enweghị ihe ngosi dị ka ọ na-eme na Galaxy dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung Galaxy M51 ga-enwe igwefoto quad azụ